रोचक विश्व – Biswas News
आज विश्व मूर्ख दिवस: झुक्याउन सक्छन सजक रहनु हाेला !
विश्वास संवाददाता	 Apr 1, 2019 407	0
नयाँ बन्दै गरेको ग्रहको पहिलो प्रमाणित तस्वीर…
किन चढाइयो मन्दिरमा आइफोनर ? हेर्नुहाेस्…
सामाजिक सञ्जालमा मोदीका बढी ‘फलोअर’ तर ट्रम्प…
अमेजोनका मालिक जेफ बजोस रोबोट कुकरलाई घुमाउँदै
banner 1st English Facebook Fact Check Featured International National
तपार्इ भ्रममा हुनुहुन्छ ! फेसवुकमा BFF काे अर्थ यस्ताे छ।
विश्वास संवाददाता	 Mar 22, 2018 0
दुई दिन अगाडि सामाजिक संजाल फेसबुकको अमेरिकामा ५ करोड प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण चोरी भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । जसको कारण फेसबुकको सेयर मुल्य ९ प्रतिशतले बढीले घटेको छ । फेसबुकमा अहिले एउटा कुरा ट्रोल बनिरहेको छ । फेसबुकमा तपाईको आइडी सुरक्षित गर्नको गर्नको लागि कमेन्टमा BFF लेख्ने र हरियो…
विश्वको खुसी मुलुक सूचीमा भारतका भन्दा नेपालका जनता खुसी
विश्वास संवाददाता	 Mar 20, 2018 0
६ चैत, काठमाडौं । आज मार्च २० तारिख, अर्थात् विश्व खुसी दिवस । यो दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक एक रिपोर्टअनुसार…
विश्वकै पहिलो नागरिकताधारी रोबोटलार्इ नेपाल ल्याइँदै
६ चैत, काठमाडौं । नागरिकताधारी रोबोट सोफियालाई बुधबार नेपाल ल्याइने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बिकास कार्यक्रम…
सलमान खान नेपाल नअाउने । अब के हुन्छ ५ हजार टिकट ?
विश्वास संवाददाता	 Mar 2, 2018 0
१८ फागुन, काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सलमान खान नेपाल आउने कार्यक्रम स्थगित भएको छ । विप्लव समूहको चेतावनीलाई कारण देखाउँदै सलमानले नेपाल नआउने सन्देश पठाएका हुन् । खानको ‘दबंग द टुर’ १० मार्चमा काठमाडौंमा हुने तय भएको थियो । टुँडिखेलमा हुने शोमा अभिनेत्री सानोक्षी सिन्हा, प्रभु देवा, मनिष पल लगायतका…
माघे सक्रान्ति, माघी अर्थात गोरु जुधाई
विश्वास संवाददाता	 Jan 15, 2018 0
ब्रजेश खनाल नुवाकोट ,माघ १। आज माघे सक्रान्ति पर्वको अवसरमा नुवाकोटको तीन स्थानमा चालिस हल गोरु जुधाउन…
विश्वास संवाददाता	 Jan 12, 2018 0
नुवाकोट, २८ पुस । नुवाकोटमा यो वर्षको माघे सङ्क्रान्तिमा २८ हल गोरु जुधाइने भएको छ । जिल्लाको तारुका र बेत्रावतीमा…
विश्वास संवाददाता	 Jan 11, 2018 0
नुवाकोट जिल्ला बेल्कोटगढि नगरपालिका वडा नं १२ पिता बिष्णु पाैडेल माता अम्बिका पाैडेलको कोख वाट जन्म लिएका युवा गायक नारायण पाैडेल सानै देखि बहु प्रतिभा सालि व्याति हुन । सानै उमेरमा स्कुलमा हुने कार्यक्रम सहभागी भइ उत्कृष्ट हुने गर्दथे ,पछि कलेज अाएर नि उनी अझै तेजिलो प्रतिभासालि हदै गय जिल्ला…